Isitolo esidayisa yonke impahla Yemvelo Fibre Jute Rope Umkhiqizi nomhlinzeki | I-Dongyuan
Intambo ye-PP Split Film
I-PP / PE Net
PP / PE ekhuphuka ifindo / ifindo ...
PE ezimibalabala twine r ...
Isici somthengisi ...
Ikhwalithi ephezulu PE ezinemibala ...
yokuthengisa hot blue twiste oluhlaza ...
Yemvelo Fibre Jute Rope eco-friendly
Intambo yeJute yenziwe ngemicu yemvelo. Kuyizinto zokuhlobisa ezimangalisayo ze-desigen yangaphakathi kanye nokwakhiwa kwangaphandle. Ngaphandle kwezobuciko, isetshenziswa kakhulu engadini, ukuhlobisa, ezolimo kanye nokudoba. Yize ingenamandla noma imelana namakhemikhali, uwoyela, imiphumela yesimo sezulu njengezintambo eziningi, inezinto zayo eziphakeme. Intambo yeJute ithambile, inobungani emvelweni futhi ayisheleli.
Ububanzi be-jute esibunikezayo buyahluka kusuka ku-3mm kuye ku-50mm. Ngokuvamile imicu engu-3 noma engu-4 isontekile. Ngesikhathi sokukhiqizwa kwalezi zintambo, awekho amakhemikhali afakiwe. Futhi intengo yalezi zintambo iyathandeka kubantu abavamile.
Yemvelo noma eyenziwe ngezifiso
Ikhoyili, inqwaba, i-reel, i-spool
Ubuciko, ukupakisha, ezolimo, ezokudoba, ukukhuphuka
Ithambile, ifundeka kalula, inobungani bemvelo, ayisheleli
AmaJute twines nezintambo kuvame ukupakishwa ngendlela yebhola, inqwaba, ikhoyili, isipuni bese kuba isikhwama eselukiwe sangaphandle. Siphinde futhi sinikeze izidingo zephakheji yekhasimende mayelana nephakheji. Ukubheka amafomu ejwayelekile wephakheji ejwayelekile.
Inqubomgomo yethu yokuhweba kwamanye amazwe
Samukela imigomo yenqubomgomo yokuhweba kwamanye amazwe efana ne-FOB, CFR, CIF, DDP, EXW. Isikhathi sokukhiqiza cishe izinsuku ezingama-30-45. Ngaphambi kokukhiqizwa, singanikela ngesampula mahhala kepha sidinga ukuthi uthwale izindleko zezimpahla okokuqala ngokubambisana. I-Qingdao port ingukukhetha kwethu kokuqala futhi ungakhetha namanye amachweba afana ne-Shanghai, Ningbo noma i-Guangzhou port. Sinezindinganiso zethu zemikhiqizo kodwa futhi singenza insizakalo ye-OEM njengezidingo zakho.
I-Yantai Dongyuan iyindophi yobuchwepheshe, inetha, umkhiqizi we-twine kanye nomthumeli othengisa kwamanye amazwe onesipiliyoni esingaphezu kweminyaka kule mboni. Sinezinto eziqinile zokukhiqiza nokuphathwa kwekhwalithi futhi sidlulile isitifiketi sokuphathwa kwe-ISO ne-SGS. Imikhiqizo yethu yamukelwa kahle ngamakhasimende. Siyazi ukuthi izimakethe zasekhaya nezangaphandle zingahlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo efanelekile nekhwalithi ephezulu ngentengo enhle.
Langaphambilini Intambo ye-polyester isontekile yalukwa
Olandelayo: Amandla aqinile we-Tensile High anemibala e-PE 3-Strand Twisted Rope
Ukudoba Net Twine Rope
I-Hemp Marine Rope
Intengo Yezintambo Ezimbili